Mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho oo Dowladda Turkiga ku eedeysay inay Soomaaliya gumeysi ku heyso
Mogadishu jimco 7 December 2012 SMC
Mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ka howlgala ayaa eedeyn ba'an u jeedisay Dowladda Turkiga, iyadoo idaacadu sharaxaad dheer ka bixisay Dowladda Turkiga, gaar ahaan hay'adaheeda gargaarka inay yihiin basaasiin iyo kuwo danahooda gaarka ah u yimid wadanka Soomaaliya.
Idaacaddaan ka howlgasha magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Radio Shabelle ayaa markii ugu horeysay hawada u sii daayay eedeymo iyo aflagaadooyin ka dhan ah Dowladda Turkiga oo ka mid ah dowladaha gargaarkii ugu weynaa u fidiyay Soomaaliya, isla markaana dalka gudihiisa ka wada mashaariic lagu horumarinayo dalka.
"Dowladda Turkiga dalka waxay ka wadaa gumeysiga casriga cusub" ayaa lagu yiri barnaamij ay ka qeyb galeen weriyeyaal ka howlgala idaacadaasi oo socday muddo ka badan hal saac, kaasi oo xalay laga sii daayay Radio Shabelle.
Barnaamijka lagu cambaareynayo waxqabadka Dowladda Turkiga ee laga sii daayay idaacadaasi ayaa ku soo beegmaya xilli Hay'adda TIKA magaalada Muqdisho ka bilowday olole lagu ballaarinayo waddooyinka, kaasi oo shalay lagu burburiyay gidaar wadada soo galay oo ku yiilay agagaarka xarunta Radio Shabelle, taasi oo u muuqata mid ay ku difaacayaan dhismayaasha sharci darrada ah ee ay ka sameysteen wadada dhexdeeda.
Dhinaca kale cambaareynta iyo eedeymaha Idaacadda Shabelle u jeedineyso Dowladda Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Istanbul ay ku sugan yihiin wufuud ka socota Dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh.
Dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa isweydiinaya sababta keentay in idaacad ku taala goobaha ay Dowladdu maamusho loogu aflagaadeeyo Dowlad gacan saar la leh Dowladda Soomaaliya, iyagoona ugu baaqay ciidamada ammaanka inay si degdeg ah wax uga qabtaan dacaayadaha iyo been abuurka ay idaacadani bulshada ku dhex faafineyso.